Degmooyinka Muqdisho qaar oo laga billaabay bixinta kaararka iyo shatiyada dowladda hoose – Kalfadhi
Maamulka Dowladda Hoose ee Xamar ayaa koowdii Maarso dib u howlgeliyay xafiisyada adeegga ee heer degmo. Xarumahan waxay shacabku ka heli doonaan adeegyada kala ah; shatiyada, dhalashooyinka iyo sugnaanta, kaararka aqoonsiga ee dowladda hoose iyo nootooyinka oo markii hore loo doonan jiray xarunta gobolka, sida uu sheegay duqa magaalada Muqdisho, Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Injineer Yariisow).
Duqa magaalada oo ka hadlayay daah-furka xafiisyadan ayaa shaaciyay in xarumahan cusub ay billow u yihiin daadajinta adeegyada bulshada. Wuxuu shaqaalaha dowladda hoose kula dardaarmay inay shacabka ugu adeegaan si hufan. Xafiisyadan waxaa laga hirgeliyay degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag, laakiin qorshuhu waa in la wada gaarsiiyo 15-ka degmo ee kale ee gobolka, iyadoo sidoo kale si tartiib ah loo dhameystiri doono dhamaan adeegyada dowladda hoose.
Maxay ka dhigan tahay inay adeegyadan bixiyaan degmooyinka?
Adeegyadan waxaa loo doonan jiray xarunta maamulka gobolka Banaadir oo kaliya, halkaas oo ay isugu tagi jireen dhammaan shacabka ka yimaada degmooyinka gobolka, sida uu Kalfadhi u sheegay guddoomiyaha degmada Hodan, Maxamed Axmed (Cantoobo).
Wuxuu intaas raaciyay in xafiisyada adeegga heer degmo ay dadka uga marmaami doonaan tegiska xarunta ay dowladda hoose ku shaqeyso ee Fiisho Gofeerno.
“Adeegyadan waxaa ka mid ah bixinta shatiyada, tusaale; dadka goobaha ganacsi ku leh degmada Hodan waxay ku heli doonaan muddo ku siman 10 daqiiqo,’’ ayuu yiri Cantoobo.
Yaasiin Maaxi oo ah Soomaali wax ku soo bartay dalka Sweden, ahna gudoomiyaha xisbiga Midnimada Shacabka Soomaaliyeed ayaa Kalfadhi u sheegay in nidaamka dowlad-wanaagga uu sidiisaba u dhisan yahay seddex qeybood oo u adeega bulshada, kuwaas oo kala ah; adeeg heer qaran ah, mid heer gobol ah iyo adeeg heer degmo ah.
“Shacabka Soomaaliyeed ma haystan adeegyadii aasaasiga ahaa ee ay u baahnaayeen sida waxbarashada, caafimaadka iyo biyo nadiif ah, balse [dadku] way soo dhaweynayaan adeegyadan loo soo wareejiyay heerka degmo,” ayuu yiri Yaasiin Maaxi.
Wuxuu Yaasiin ku taliyay in sido kale adeegyo badan laga soo qaado gobolka lana keeno heer degmo sida qaadista canshuurta, si ay degmada dib ugu celiso isla bulshadii canshuurta laga soo qaaday, iyadoo loo sameyn karo goobo laga helo waxbarasho lacag la’aan ah, xarumo caafimaad iyo adeegyo kale oo muhiim u ah bulshada.
Adeegyadan waxaa horay si kumeel gaar ah u bixin jiray degmooyinka qaar. Nuuradiin Maxamed Cabdi oo ah wiil dhallinyarro ah wuxuu markii ugu horreysay kaarka aqoonsiga dowladda hoose ka qaatay degmada Shibis oo ah halka uu ku dhashay, kuna soo barbaaray.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay adeeggan la ii qabtay balse waxay igu qaadatay inaan helo labo toddobaad,’’ ayuu yiri Nuuradiin oo kaarka qaatay bishii Jannaayo ee sanadkan.
Degmooyinka horay u bixin jiray adeeggan waxay ku qaadan jirtay waqti badan maaddaama qalab aysan haysan oo ay ku qasbanaayeen inay tagaan xarunta dowladda hoose. Hase yeeshee degmooyinka dib looga billaabay waxaa la dhigay qalab u fududeynaya inay xarumahooda wax kasta ku sameeyaan.
Degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag waxaa ku yaalla xarumo ganacsi oo waaweyn oo uu ku jiro suuqa Bakaaraha, waxayna tan dadka u badbaadin doontaa waqti badan oo ay ku booqan lahaayeen xarunta dowladda hoose oo ku taalla degmada Xamarweyne.
W.D: Xuseen Maxamed